ESI MEE KA MMIRI ZOO NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Mee ka mmiri ozuzo dị na Photoshop
Ọ bụghị n'ọnọdụ ọ bụla, ngosi dị na PowerPoint kwesịrị ịbụ nanị n'ụdị kọmputa. Dịka ọmụmaatụ, na mahadum, ọ dị mkpa mgbe nile iji tinye akwụkwọ nsụgharị nke ọrụ ha na ihe omume ha ma ọ bụ diplomas. Ya mere ọ bụ oge iji mụta ibipụta ọrụ gị na PowerPoint.
Mbipụta akwụkwọ na Okwu
Akwụkwọ edemede na Excel
Ụzọ iji bipụta
N'ozuzu, enwere ụzọ abụọ n'ime usoro ihe omume iji zipụ ihe ngosi na onye nbipute maka ibipụta. Nke mbụ na-egosi na a ga-emepụta slide ọ bụla na mpempe akwụkwọ dị iche na nhazi zuru ezu. Onye nke abụọ ga-azọpụta akwụkwọ site na ịgbasa niile slides na ego kwesịrị ekwesị na ibe ọ bụla. Dabere na iwu, nhọrọ ọ bụla na-egosi mgbanwe ụfọdụ.
Usoro 1: Ụdị omenala
Ozigharị nkịtị iji bipụta, dịka ọ na-egosi na ngwa ọ bụla ọzọ site na Microsoft Office.
Mbụ ị ga-aga tab "Njikwa".
N'ebe a, ị ga-aga ngalaba "Bipute".
A menu mepee ebe ị nwere ike ime ntọala ndị dị mkpa. More na nke a ga-abụ n'okpuru. Site na ndabara, mpaghara ebe a na-akwado ihe ndị a chọrọ iji bipụta mkpụrụ akwụkwọ - a ga-eke otu otu nke slide ọ bụla ma bipụta ya na agba, otu slide kwa mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụ na nhọrọ a dabara, ọ na-anọgide na-pịa "Bipute", na iwu ahụ ga-agafe na ngwaọrụ kwesịrị ekwesị.
Ịnwere ike ịga ngwa ngwa na mbido ebipụta site na ịpị otu kpochapụ ọkụ "Ctrl" + "P".
Usoro 2: Nhazi na mpempe akwụkwọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta otu slide kwa mpempe akwụkwọ, ma ọtụtụ, ị ga-achọ ọrụ a.
Ịkwesịrị ịga na mpaghara ahụ "Bipute" aka ma ọ bụ na igodo ọnụ ọkụ. N'ebe a, ị chọrọ ịchọta nke atọ site n'elu, nke na ndabara bụ "Na-eme ka ihe niile dị na peeji nke".
Ọ bụrụ na ị gbasaa ihe a, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ nhọrọ obibi akwụkwọ na ngwe nke okpokolo agba na mpempe akwụkwọ. Ị nwere ike ịhọrọ site na 1 ruo 9 ákwà n'otu oge, gụnyere.
Mgbe ịpị "Bipute" a ga-ebufe ihe ngosi ahụ na akwụkwọ dịka ahịrị ahọpụtara.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na mgbe ị na-ahọrọ obere mpempe akwụkwọ na ọnụ ọgụgụ kachasị nke slides mgbe ị na-esetịpụ, àgwà ikpeazụ ga-ata ahụhụ. A ga-ebipụta esemokwu akwụkwọ dị iche iche ma dị oke mkpa, tebụl ma ọ bụ obere ihe ga-abụ nke a na-apụghị ịmata. Tụlee ihe a.
Ịtọpụta template maka obibi akwụkwọ
I kwesịkwara ịtụle ịdegharị esemokwu nke ihe ngosi slide na ụdị mbipụta.
Iji mee nke a, gaa na taabụ "Lee".
Ebe ị ga-achọ pịa "Ihe nlele".
Usoro ihe omume a ga-abanye na usoro pụrụ iche nke na-arụ ọrụ na ihe atụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhazi ma mepụta otu ụdị pụrụ iche nke ụdị akwụkwọ ahụ.
Mpaghara "Ntọala Ntọala" na-enye gị ohere ịgbanwe usoro nhazi na ogo nke ibe ahụ, yana ọnụ ọgụgụ slides ga-ebipụta ebe a.
"Ndị ọbịa" nye gị ohere itinye akara ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, nkụnye eji isi mee na n'okpuru, ụbọchị na nọmba peeji.
Na mpaghara ndị ọzọ, ị nwere ike hazie ibe weebụ. Na ndabara ọ na-efu ma akwụkwọ ahụ dị ọcha. Na otu ntọala ahụ, na mgbakwunye na slides, a ga-ahọpụta ihe ndị ọzọ eji eme ihe n'ebe a.
Mgbe ịmechara ntọala ahụ, ịnwere ike ịpụ na ngwá ọrụ ahụ site na ịpị "Na-emechi ụdị ngosi". Mgbe nke ahụ gasịrị, a pụrụ itinye ụkpụrụ a mgbe ị na-ebi akwụkwọ.
Mgbe ị na-ede akwụkwọ na windo ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ. Ọ bara uru ịchọta ihe onye ọ bụla n'ime ha nwere.
Ihe mbụ ị ga-ege ntị bụ imepụta akwụkwọ. N'elu akuku elu ị ga-ahụ ebe maka nọmba nke mbipụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta akwụkwọ ahụ dum, mgbe ahụ, a ga-ebipụta slide ọ bụla ọtụtụ ugboro dị ka e gosipụtara na mpaghara a.
Na ngalaba "Onye nbipute" Ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ nke a ga-ezipụ ngosi iji bipụta. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ n'ime ha, ọrụ ahụ bara uru. Ọ bụrụ na onye nbipute ahụ bụ otu, usoro ahụ ga-enye ya na-akpaghị aka iji ya.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ezipụta otú na ihe ị ga-ebipụta. Site na ndabara, nhọrọ ahọrọ ebe a. "Bipụta ihe ngosi dum". E nwekwara nhọrọ ndị na-enye gị ohere iziga otu slide na ngwa nbipute, ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ndị a.
Maka ihe ikpeazụ ị nwere akara dị iche iche ebe ị nwere ike ịkọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke slides achọrọ (na usoro "1;2;5;7" wdg), ma ọ bụ oge (na usoro "1-6"). Ihe omume ahụ ga-ebipụta kpọmkwem okpokoro ndị a kapịrị ọnụ, ma ọ bụrụ naanị na nhọrọ ahụ dị n'elu bụ kpọmkwem. "Oghere Iche".
Ọzọ, usoro ahụ na-enye ịhọrọ usoro mbipụta. Ihe a ga-arụ ọrụ na ntọala nke ndebiri ndebiri. N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nke obibi akwụkwọ dị elu (ga-achọ ink na oge), ịgbatị slide n'ofe obosara dum, na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ mbipụta mbipụta, nke a kpọtụrụ aha na mbụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ebipụta ọtụtụ mbipụta, ị nwere ike ịtọ usoro ahụ iji kwado akwụkwọ. Enwere naanị nhọrọ abụọ - ma usoro ahụ ga-ebipụta ihe niile na arụ ọrụ nke akwụkwọ ahụ mgbe a tọhapụrụ slide ikpeazụ, maọbụ kwugharia okpokoro ọ bụla n'otu oge ugboro ole ọ dị mkpa.
Ọfọn, n'ikpeazụ, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ntanetị - agba, nwa na ọcha, ma ọ bụ nwa na ọcha na ndò nke isi awọ.
Dị ka njedebe, ọ bara uru na-ekwu na ọ bụrụ na a na-ebipụta ihe ngosi dị oke mma na nnukwu ngosi, nke a nwere ike iduga nnukwu ọnụahịa ọnụ. N'ihi ya, a na-atụ aro ka ịhọrọ usoro n'usoro iji mee ka nchekwa dị elu, ma ọ bụ otu esi echekwa na cartridges na inks ka ị ghara inwe ihe isi ike n'ihi akwụkwọ nzacha.